Nangalatra ny angon-drakitra manokana an'ny mpandeha tamin'ny fanafihana fiarovana an-tserasera Bangkok Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Nangalatra ny angon-drakitra manokana an'ny mpandeha tamin'ny fanafihana fiarovana an-tserasera Bangkok Airways
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny famotopotorana voalohany ny zava-nitranga dia toa nanamafy fa ny sasany amin'ireo angona manokana dia mety nalaina, izay, anaran'ny mpandeha, anaram-pianakaviana, zom-pirenena, miralenta, nomeraon-telefaona, mailaka, adiresy, fampahalalana momba ny pasipaoro, fampahalalana momba ny dia an-tantara, ampahany fampahalalana momba ny carte de crédit, sy ny mombamomba ny sakafo manokana.
Bangkok Airways Public Company Limited dia efa iharan'ny fanafihana amin'ny cyber.
Ny fanafihana dia nahatonga ny fidirana tsy ara-dalàna sy tsy ara-dalàna amin'ny rafitry ny fampahalalam-baovao.
Ny tranga dia efa notaterina tany amin'ny polisy Royal Thai ary koa ny fampandrenesana an'ireo manampahefana voakasik'izany.
Tamin'ny 23 aogositra 2021, Bangkok Airways Public Company Limited dia nahita fa niharan'ny fanafihana an-tserasera ity orinasa ity izay niafara tamin'ny fidirana tsy ara-dalàna sy tsy ara-dalàna amin'ny rafitry ny fampahalalam-baovao.
Rehefa nahita izany, Bangkok Airways avy hatrany dia nandray ny andraikiny tamin'ny famotorana sy ny famonoana ny hetsika, niaraka tamin'ny fanampian'ny ekipa mpiaro ny cyber. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manadihady, amin'ny maha-maika, mba hanamarinana ireo angon-drakitra tratry ny fiatraikany sy ireo mpandeha voakasik'izany ary koa ny fandraisana fepetra mifandraika amin'ny fanamafisana ny rafitra IT.
Fanadihadiana voalohany momba ny zava-nitranga dia toa nanamafy fa ny sasany amin'ireo angona manokana dia mety niditra, anarana mpandeha, anaran'ny fianakaviana, zom-pirenena, lahy sy vavy, nomeraon-telefaona, mailaka, adiresy, fampahalalana momba ny pasipaoro, fampahalalana momba ny dia an-tantara, fampahalalana momba ny kara-trosa sasany, ary manokana fampahalalana momba ny sakafo. Ny orinasa na izany aza dia nanamafy fa tsy nisy fiatraikany amin'ny rafitra fiarovana na fiaramanidina fiaramanidina ny zava-nitranga.
Ity tranga ity dia efa notaterina tany amin'ny polisy Royal Thai ary koa ny fampandrenesana an'ireo manampahefana voakasik'izany. Ho an'ny fepetra fisorohana voalohany dia mamporisika mafy ireo mpandeha hifandray amin'ny banky na ny mpanome carte de crédit azy ireo ny orinasa ary hanaraka ny torohevitr'izy ireo ary hanova izay teny miafina voatokana haingana indrindra.
Ho fanampin'izay, te hampitandrina ireo mpandeha ny orinasa mba hahafantatra ny antso sy / na mailaka mampiahiahy na koa tsy ampoizina, satria ilay mpanafika dia mety milaza ho Bangkok Airways ary manandrana manangona angona manokana amin'ny alàlan'ny fitaka (fantatra amin'ny hoe 'phishing' ). Ny orinasa (Bangkok Airways) dia tsy hifandray amin'ireo mpanjifa mangataka antsipirian'ny carte de crédit sy fangatahana toy izany. Raha sendra tranga toy izany dia tokony handray fepetra ara-dalàna ny mpandeha.
W. Kami hoy:
28 Aogositra 2021 amin'ny 15:43
Tena marina sa sandoka ny fampitandremana Bangkokair?
Manontany tena aho satria matetika izy ireo dia mampiditra mailaka amin'ny anarako fa tsy hoe 'Mpanjifa malala' fotsiny.
Ankoatr'izay, ny nomeraon-telefaona nomena dia samy hafa amin'ny isan'izy ireo amin'ny tranonkalany ankehitriny?